नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन तर चोइटिन सक्छ » छलफल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन तर चोइटिन सक्छ
प्रदीप नेपाल, नेता, नेकपा
पछिल्लो समयमा यहाँ राजनीतिमा त त्यति सक्रिय हुनुहुन्न तर अहिले यहाँको सञ्चारमाध्यममा निकै नै चर्चा छ, हालै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उहाँका राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, ५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले यहाँसँग भेट गर्नुभयो, यो भेट कस्तो थियो, योभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू आइरहनुहुन्थ्यो कि के थियो ?
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालचाहिँ योभन्दा अगाडि आउनुभएको थियो भने अन्य सबै पहिलोपटक हो । तपाईं यो ठाउँमा हुनुहुँदोरहेछ तपाईंसँगको कुराकानी थाल्नुअगाडि म एकपटक गोपालप्रसाद थपलियालाई सम्झन चाहन्छु । उहाँ मेरो पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ । पुरानो भएको हुनाले नै अब तपाईंहरूले केपी र माधवलाई मिलाउनु प¥यो, उहाँहरूबीचको अन्तद्र्वन्द्व धेरै चर्को छ, परिस्थिति अप्ठेरो छ, तपाईंहरूले मिलाउनु प¥यो भन्नुभएको थियो । मैले म दिमागको बिरामी मान्छे औषधि खाइरहेको छु, मबाट यो काम हुँदैन तपाईंहरू यो काम आफँै गर्नुस् भनेर पठाएँ । तर अहिले त के के आएछ के के मत आफैँ छक्क पो परेँ ।
उहाँहरूचाहिँ प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा आउनुभएको भनेर आएको थियो नि ?
होइन, त्यस्तो । यी सबैलाई मैले नै राजनीतिमा ल्याएको हुँ । यी पाँचैजना पहिलेका मेरा राम्रा कार्यकर्र्ता हुन् ।
यी कार्यकर्ताले यसभन्दा अगाडि कत्तिको सम्झन्थे ?
त्यो त नभनौ, किनकी यसमा तपाईंलाई जस्तो लागिरहेको छ, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन । उहाँहरू आउनुको अर्थचाहिँ उहाँरूले भन्नु पनि भयो तपाईं जहिले पनि मिलाउने कुरामा अगाडि हुनुहुन्छ अब पनि एकपटक लागिदिनुप¥यो मिलाई दिनुप¥यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । सधँै म लागिरहनु पर्ने हो भने तपाईंहरू किन चाहियो र तपाईंहरूको काम के र ? मेरै स्पिटमा काम गर्नुभयो भने भइगयो भनिदिएँ ।
यसको मतलब पछिल्लोसमय पार्टीमा जस्तो खालको संकट चुलिँदै आयो त्यो संकटको व्यवस्थापनका लागिचाहिँ यहाँले भूमिका खेल्दिनुप¥यो भनेर आउनुभएको हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट एउटा प्रस्ताव पठाइएको थियो भनेर सुनिएको थियो कि अब यो पार्टी एउटै नरहने भयो, त्यसैले पूर्वएमालेको तर्फबाट एमाले पार्टीको अध्यक्ष बनिदिनुप¥यो भनेर यहाँलाई एउटा प्रस्ताव पनि पठाइएको थियो रे नि ?
होइन, त्योचाहिँ कान्तिपुरले लेखेको हो । कान्तिपुरकी विनु सुवेदीले लेखेको त्यहाँ उहाँको खण्डन पनि आयो । मैले त्यहाँ तल स्पष्ट लेखेको छु, उहाँले बन्दिन भन्नुभयो यो कुरा हल्ला हो भनेर भन्नुभएको छ । यो फटाइचाहिँ कान्तिपुरको हो । जुन कुरा होइन थियो, त्यो कुरालाई हाइलाइट गरिदियो । म अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव नै कसैले ल्याएकै छैन । त्यो हाइलाइटचाहिँ भित्र हुनु पर्दथ्यो र मैले बोलेको कुराचाहिँ बाहिर हुनु पर्दथ्यो, पत्रकारको खेल त म पनि अलिअलि जान्दछु नि ।
यसको मतलब यस्तो प्रस्तावचाहिँ थिएन ?
त्यसो भए माधव केपीलाई मिलाई दिनुप¥यो भन्ने मात्रै थियो ?
हो, त्यही थियो । अहिले उहाँका बीचमा अलि चर्कै अन्तद्र्वन्द्व छ । हिजो माधव पनि आउनुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो । उहाँहरूको बीचमा हामी अन्तद्र्वन्द्व भन्छौं त्यस्तो रैछ । तर, उहाँका कुरा सुनेपछि मलाई त्यस्तो केही लागेन ।
माधव नेपाल हिजो सोमबार आउनुभयो, कति समय कुराकानी भयो ?
हो, हिजो उहाँ यहीँ आउनुभएको थियो, म त कहीँ निस्किन्नँ । उहाँ यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि, उहाँको जहरसिंहपौवामा कार्यक्रम रहेछ । उहाँले आफँै फोन गरेर त्यो कार्यक्रम सकेर म तपाईंकोमा आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनुभयो । उहाँसँग मेरो राम्रै छ, एकघण्टा जति कुराकानी भयो । उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुभयो । उहाँले ती केटाकेटीहरूबाट त म सन्तुष्ट हुनै सक्दिनँ तपाईंले पनि उनीहरूसँग कुरा नगरे हुन्छ किनकि उहाँले कसैको भनाइ मान्नुहुन्न तपाईंलाई नै उहाँले बोलाएर सोध्नुभयो भने मेरा यी कुरा छन् भनेर भन्नुभयो । हुन पनि केपी ओलीले आफैँ नगरेको काम अरूले भनेको मान्नुहुन्न सुन्नुहुन्न । उहाँको स्वभाव त मलाई थाहा छ नि । म र उहाँसँगै २०३३ सालमा जेल बसेको उहाँ ४३ सालमा छुट्नुभयो । त्यसबेलादेखिको सम्बन्ध ४० वर्षदेखिको सहकार्य भयो मलाई थाहा छ नि । उहाँ अलि अररो हुनुहुन्छ त्यसैमा कुरा नमिलेको हो ।
के रहेछन् त कुराहरू समस्या के के रहेछन् समस्या के मा रहेछ कुरो नमिलेको माधव र केपीको ?
उहाँले भनेको कुरा म जस्ताको तस्तै राखिदिन्छु । उहाँले मलाई भन्नुभएको केपी ओलीले जे पनि हुन्छ भन्ने नगर्ने, हुँदैन, म यसकारण सक्दिनँ, केही नभन्ने, हुन्छ भइहाल्छ नि, म गरिहाल्छु नि भन्ने, गर्न केही नगर्ने । सुन्यो हुन्छ भन्यो, उडाइदियो । त्यसमा झगडा गर्न पनि नमिल्ने किनकी उहाँले नयाँ नयाँ एजेण्डा ल्याइदिने, अनि हस म गरिहाल्छु नि भन्ने गर्ने बेलामा केही नगर्ने । त्यसैले अब त वार्ता लिखित हुनुपर्छ, एजेण्डामा छलफल हुनुपर्छ, कागज नगरी हुँदैन तपाईं बस्नुस्, उहाँ, हामी बसौँ हामीसँग एक कपी हुन्छ तपाईंसँग एक कपी भन्नुभयो । मैले हुँदैन कमरेड, म सक्दिनँ भने ।
माधव नेपाल पनि तपाईंसँग आउनुभयो, प्रमका सल्लाहकारहरूले पनि तपाईंलाई भेटेर मिलाई दिनुप¥यो भन्नुभयो यसको मतलब तपाईंसँगबाट उहाँहरूले अभिभावकको भूमिका खोजिरहनुभएको रहेछ हो ?
होइन, उनीहरू पाँचजनामध्ये ३ जना नेता दुईजना कार्यकर्ता प्रधानमन्त्रीका नजिकका ५ जना मसँग कुरा गर्न आए । तर माधव त्यस्तो होइन । उनीहरू गएपछि माधव आउनुभयो । उनीहरूले केही भ्रम छरे कि भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला । अनि मसँग कुरा गर्न आउनुभयो । उहाँ यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि उहाँको जहरसिंहपौवामा कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम सकेर म तपाईंकोमा आउँछु भन्नुभएको थियो । त्यो कार्यक्रम सकेर यतैबाट फर्कँदा मलाई भेट्न आउनुभएको थियो र कुरा भयो ।
माधवले के कस्ता कुरा गर्नुभयो र ककसका विषयमा के के कुरा भए के भन्नुभयो त तपाईंसँग ?
सबैका विषयमा कुरा भए । उहाँको गुनासोचाहिँ केपीका विषयमा अलि बढी थियो । मैले भनेको केपीले हुन्नँ, गर्दिनँ केही नभन्ने, काम केही नगर्ने, राजदूतमा नाम माग्नुहुन्छ दियो गर्नुहुन्न, अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सोध्नुहुन्छ, नाम माग्नुहुन्छ गर्नु हुन्न मेरो एउटा पनि काम गर्नुभएन । उहाँले भन्ने नै गुनासो उहाँको गुनासो मसँग राख्नुभयो । मसँग मात्रै होइन, प्रचण्डसँग वामदेवसँग सबैसँग उहाँले यसै गर्नुहुँदोरहेछ भन्नुभयो ।
त्यसो भए त उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीबाट इरिटेड नै भइसक्नुभएको रहेछ होइन ?
हो, मैले त्यस्तो पाएँ । माधवले यतिसम्म चित्त दुखाइको कुृरा भन्नुभयो कि मैले एकजना पार्टीका २०३३ सालतिर पार्टीमा काम गरेका पुराना नेतालाई दुई लाख रुपैयाँ मागेको दिनुभएन समेत भन्नुभयो । पहिले त मलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो तर उहाँका कुरा सुन्दा मिलाउन सकिएला जस्तो लागेन ।
यसको मुख्य जड के रहेछ ?
एउटा जीवन्त पार्टीमा गुट त भई नै रहने कुरा हो किन यस्तो अवस्था भयो होला ?
गुटसँग मलाई पनि डर लाग्दैन । गुट पार्टीमा हुन्छ । चुनावमा गइसकेपछि जित्नेले आफ्ना मान्छे त राख्छ नै हामीलाई त राख्दैन । त्यसैले म गुट भएकोमा त चिन्ता गर्दिनँ तर उहाँले व्यवस्थापन नै गर्न जान्नुभएन । उहाँले अहिले राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको भए फेरि अर्को महाधिवेशनमा पनि जित्नुहुन्थ्यो तर अब चुनाव भयो र उहाँ उठ्नुभयो भने जित्नुहुन्न । अहिले पार्टीमा माधवकै मत बढी छ । किनकी हाम्रो पार्टी बेग्लै ढंगले आयो नि । पार्टीमा कसले भ्रष्टाचार ग¥यो, कसले पैसा खायो, कसको नाम बद्नाम भयो त्यो बेग्लै कुरा हो तर यो कुरामा माधव नेपाल मुछिनुहुन्न, बद्नाम हुनुहुन्न, बद्नाम हुने काम गर्नुहुन्न यतिचाहिँ ढुक्क छ । उहाँ एउटा असल म्यानेजर हो अहिले पार्टीलाई त्यही असल म्यानेजरको आवश्यकता छ । त्यसैले उहाँलाई अध्यक्ष बनाउँदा पार्टी राम्रो हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अब नेकपा फुट्ला वा एक ढिक्कै होला त ?
पार्टी फुट्दैन, चोइटिन्छ । किनकी सुरुमै प्रचण्डले के गल्ती गर्नुभयो भने सुरुमा जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो कार्यक्रम हो भन्नुभयो, मदन भण्डारीको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । मदन जीवित भएको भए हामी जंगलै जानु पर्दैनथ्यो भन्नुभयो र पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । अहिले आएर होइन हामीले त जनताको जनवाद पो भनेको हो, हामीले कहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद मानेको हो र भन्नुहुन्छ । यो सरासर बेइमानी हो । त्यसैले उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ म उहाँलाई मान्छु, भन्नुहुन्न मान्दिनँ ।
तपाईंले पार्टी फुट्दैन, चोइटिन्छ भन्नुभयो यो कसरी कता चोइटिन्छ ?
यो सबै कुरा भन्न त गाह्रो हुन्छ तर म भन्छु किनकी मलाई पद चाहिएको छैन, मलाई कसैलाई रिझाउनु पर्ने पनि छैन त्यसैले मलाई कसैको डर पनि छैन । तर, यसो उहाँहरूको अर्थात पूर्वमाओवादीहरूको चाहिँ संगठन नै रहेनछ । उहाँहरूको मिलिटरी मात्रै रहेछ । हाम्रो कमिटी पद्धति छ, देशैभरि संगठन छ । त्यसै भएर कमिटी संगठन र मिलिटरी सिष्टम अर्थात संरचना मिल्दै मिलेन । भएको यही हो ।
चोइटिने भन्दा प्रचण्डहरू बाहिरन सक्नुहुन्छ ?
सक्नुहुन्छ । पुरानो माआवादी सबै जाँदैनन्, प्रचण्डसँग केही केही जान सक्छन् ।
त्यसमा सँगै माधव नेपालहरू पनि त जानुहोला नि ?
जानुहुन्न । उहाँले एउटा कुरा त भन्नुभएको छ नि । उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्दिन भन्नुभएको छ । फेरि मैले हिजो पनि सोधेँ तपाईं जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भनेर उहाँले त्यो त कहाँ छोड्न सकिन्छ र भन्नुभयो । त्यो भनेपछि त कुरै सक्किगयो नि ।
माधव नोपल प्रचण्डका बीचमा त राम्रो सम्बन्ध छ, कतै पार्टी फुट्यो भने प्रचण्ड माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव, नारायणकाजीहरू एक ठाउँमा हुन्छन् भन्छन नि ?
हुँदैनन् । मेरो त माधव कमरेडसँग दाजुुभाइको रूपमा, एउटै परिवारको रूपमा कुरा भयो नि । मैले उहाँलाई सुरुमै भने तपाईं जबज छोड्नुहुन्छ कि हुन्न ? उहाँले त्यो त कहाँ छोड्न सकिन्छ, जबज छोडेपछि त रूखसँग मिल्न गए त हो नि भन्नुभयो र अर्को कुरा भन्नुभएको छ कि म पार्टीचाहिँ फुटाउँदिन फुटाउन पनि दिन्न भन्नुभएको छ । त्यसैले अहिले सानो सानो कुरामा मन मुटाव भए पनि पछि मिल्छ ।
त्यसो भए पूर्वएमाले एक हुन्छ चोइटिने चाहिँ पूर्वएमाओवादीका प्रचण्डहरू नै हुन् ?
हो, प्रचण्डसहित केही केही नेता चोइटिएर जान सक्छन् । किनकी मैलै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीहरू मलाई भेट्न आउँदा मैले सुरुमै अबको अध्यक्ष को ? अबको अध्यक्ष फेरि पनि केपी ओली नै हुन भने कुरा मिल्दैन हामी केपीलाई मान्दैनौ अबका अध्यक्ष माधव हो भने मान्दछौ कुरा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर सोधे उहाँहरूले माधव नेपाल नै हो भनेर प्रष्ट भन्नुभयो ।
ए त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीमा फेरि पार्टी अध्याक्ष बन्ने लालसा देखिएन ?
देखिएन । पहिले पनि हामीले नै उहाँलाई जिताएको हो । अर्थात हिजो उहाँले माधवकै मान्छेको सहयोगमा जित्नुभएको हो, हामीले खटेर जिताएका हौ । म, मुकुन्द न्यौपाने त उहाँका मान्छे होइनौं त्यो त उहाँलाई थाहा छ । हामी त माधवकै मान्छे हौं तर उहाँ मृत्युको मुखमा पुगिसक्नुभयो अब एकपटक उहाँलाई दिऔँ भनेर रातदिन खटेर नै उहाँलाई जिताएका हौं । अब उहाँ चुनावमा जानुभयो भने उहाँले जित्नुहुन्न ।
केपी ओली, प्रचण्ड एकातिर हुने अवस्था आउँदैन ?
आउँदैन त्यस्तो हुँदैन विश्वास गर्नुस् किनकी म सबैभन्दा बढी काम गर्ने मान्छेमा पर्छु । उहाँको नजिकमा रहेर जीवनको करिब आधा समयसँगै काम गर्नेमा पर्छु । त्यसैले म सबै नेता कार्यकर्ताको मनस्थिति बुझ्छु । किनकी म अहिले बाहिरिएको छु, पूर्वमालेका पनि कतिपय नेता कार्यकर्ता बाहिर छन् काम पाएका छैनन्, जिम्मेवारी दिइएको छैन । त्यसैले उनीहरू त भन्छन् नि हामीलाई त पार्टीमा अन्याय भयो काम पाइएन, यो पार्टीमा त रहन नसकिने भो तपाईं अगाडि बढिदिनुप¥यो हामी पूर्वमाले सबै आउँछौ मिलाएर पार्टी अगाडि बढाउनुप¥यो भनेर आइरहेका छन नि । त्यसले अहिले हामी दिक्क भएका छौ । अहिलेको यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन र यो सरकार पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै होेइन यो त दलाल पूँजीपतिको सरकार हो । त्यसैले सबै नेता कार्यकर्ता मकहाँ आउनुहुन्छ सल्लाह गर्नुहुन्छ । अब अहिलेका बूढाहरू स्वइच्छाले हट्नुहुन्छ भने हट्नुहुन्छ नत्र हामी महाधिवेशनबाट हटाइदिन्छौ ।
केपी ओली, प्रचण्ड वा कसका कारण बिग्रियो त पार्टी ?
यो सिद्धान्तविनाको एकता गर्नाले बिग्रियो । यसरी मान्छेको टाउको मिलाएर एकता गर्नुहुन्नथ्यो । सिद्धान्तका आधारमा मिलाउनु पर्नेमा पदको आधारमा मिलाइयो अनि कसरी हुन्छ ? हामी जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छौं उहाँहरू मान्नुहुन्न । हामी माक्र्सवाद मान्छौं उहाँहरू मान्नुहुन्न । माक्र्सवाद भनेको प्रजातन्त्र हो हामी माक्र्सवाद मान्छांै, जनवाद भनेको स्टालिनवाद हो, स्टालिनवाद भनेको अधिनायकवाद हो, उहाँहरू अधिनायकवादतर्फ जान खोज्नुहुन्छ । त्यति ठूलो भिन्नता पो छ त अनि कसरी हुन्छ ।
त्यसो भए नेकपाको भविष्य त्यति राम्रो छैन होइन त ?
म देख्दिनँ । नाम त नेकपा नै हुँदो होला तर म त्यति राम्रो भविष्य देखिराखेको छैन ।
एकता कसरी सम्भव भयो त, त्यो बेला त उत्साह बहुतै थियो ?
आम्मामा कुरै नगरौँ कसैको खुट्टा भुईंमा थिएन । प्रचण्डलाई सबैभन्दा पहिले मिल्नको लागि मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ । उहाँलाई मैले भनेको थिएँ किन एक्लै बस्नुहुन्छ, कि वैद्य, बाबुराम, विप्लवलाई ल्याएर बस्नुस्, नत्र यता आउनुस् म तपाईंलाई वरिष्ठ नेता बनाउँछु, त्यो हैसियत मसँग छ भनेको थिएँ । तर त्यो बेला मैले प्रष्ट भनेको थिएँ कि तर तपाईंले यता आउँदा पार्टीको सिद्धान्त जबज स्वीकार्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ । पछि उहाँले मलाई वास्तै गर्न छोड्नुभयो विष्णु पौडेलतिर लाग्नुभयो उहाँले हतार हतार कार्यगत एकता गराऔं अरू पछि हुँदै जान्छ भन्नुभयो, प्रचण्डले मान्नुभयो ।
किन त्यति हतारो भयो विष्णु पौडेललाई चाहिँ ?
देख्दुभएन पार्टी महासचिव हुन । त्यो बेला त विष्णु पौडेल महासचिव हुनुहुन्थेन पार्टी मिलाएपछि त महासचिव हुन पाइयो, यही कारण यो हतारो गर्नुभयो ।
विष्णु पौडेललाई त महासचिव हुन रहेछ केपी ओलीलाई नि ?
उहाँलाई बलियो सरकार चाहिएको थियो । पहिले त उहाँले त्यति वास्ता गर्नुभएको थिएन पछि उहाँ सरकारमा गएपछि त कसैले ढालिपो दिने हो कि भन्ने भयो यसो माओवादी मिलाउँदा त सहज हुने भयो । केपी ओलीलाई बलियो सरकार चाहिएको थियो, यता प्रचण्डलाई सुरक्षा चाहिएको थियो । सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्ष भएपछि त अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग बच्न सहज भयो । यी दुवैको आआफ्नो स्वार्थ मिल्यो र अरू कुरा हुँदै गर्छ पार्टीचाहिँ मिलाइहालौं भनेर दुई अध्यक्ष अगाडि बढेर पार्टी एकता गरे ।
तपाईंचाहिँ किन निस्क्रिय हुनुभयो वा पाखा पारियो ?
पहिलो कुरा त मलाई किनारा नै लगाइयो । कतिपयले भन्छन् पनि वामदेवले त भन्नु नै भयो तपाईंलाई हामी माथि उठ्न दिँदैनौं । कि मेरो गुटमा आउनुस् म बोक्छु, म अगाडि बढाउँछु । होइन मेरो गुटमा आउनुभएन भने म पनि बोक्दिनँ । र यसैगरी जानुभयो भने तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ तपाईंको भविष्य यतिकै जान्छ भन्नुभयो । उहाँ र म जति बाझ्ने पनि कोही छैन । किनकी उहाँ र ममा कपट छैन । मैले उहाँलाई सोधे मलाई त यसपालि माथिल्लो सभामा पनि लानुभएन, स्थायी कमिटीमा पनि लानुभएन किनभने उहाँले सभासदमा त मलाई थाहा छैन किन लगेनन् स्थायी कमिटीमाचाहिँ विद्या भण्डारीबाहेक तपाईंको पक्षमा कोही बोलेनन् एकजना विद्यालाई सबैले खाइहाले भन्नुभएको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीसँगचाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध कस्तो छ ?
त्यस्तो भेटघाट छैन ।
दूत त पठाउनुभएको रहेछ नि । सम्बन्ध सुधार्न खोज्दै भएको अनुभूति गर्नुभएको छैन ?
मलाई त उनीहरूले गुरुलाई भेट्न आएको भनेका थिए । त्यही होला भन्ठानेको तर कुरा गर्दै जाँदा त कुरा त अर्कै पो रहेछ ।
सबैले तपाईंलाई अध्यक्ष दिन खोजे भने के गर्नुहुन्छ ?
अब म सक्दिनँ भन्छु । किनकी म पहिले १८ घण्टा काम गर्न सक्थे अहिले १० घण्टा काम गर्दा थाकिन्छ, गर्न सकिँदैन नसक्ने जिम्मेवारी लिनुभन्दा सक्ने काम गर्नुपर्छ । मलाई काम दिने हो भने सचिवालयमा बसेर काम गर्न सक्छु । यदि म सबैलाई चाहिने त रहेछु, मेरो आवश्यकता त पर्ने रहेछ त्यसो भए मलाई काम गर्न कुनै माथिल्लो भूमिका त दिनुप¥यो नि र पो मिलाउँन सकिन्छ ।
केही दिनअगाडि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहमै पार्टी फुटाऔं भन्नुभएको रहेछ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
म त्यो ठाउँमा भएको भए लौ हुन्छ भनेर आफ्नो बाटो लागिसक्थेँ यस्तो अपमान सहेर बस्ने थिइनँ । उहाँहरू सबै झापालीको एउटा रोग के छ भने आफू असली अरू नक्कली । उनीहरूको सोचाइ के छ भने हामीचाहिँ क्रान्तिकारी उनीहरू संशोधनवादी हुन्, हामीले उनीहरूलाई ल्याएर चोख्याएका हौ भन्ने मनोरोग अहिले पनि उनीहरूमा छ ।
प्रचण्ड यही पार्टीमा रहिरहनु होला कि बाहिरिनु होला ?
यही पार्टीमा रहिरहनुहुन्छ । उहाँको जाने ठाउँ छैन ।
यसको मतलब नेकपा फुट्दैन ?
फुट्दैन, चोइटिन सक्छ । नेकपा फुुट्न पूर्वएमालेका नेता कार्यकर्ताले फुटाउनु पर्छ, त्यो सम्भव छैन ।
एमाले पार्टी दर्ता भएको छ, यसमा केपी ओलीलाई आरोप लगाउनुभएको छ नि प्रचण्डले ?
त्यो हो भने त्यसलाई म राम्रो मान्छु किनकी उहाँबाट पार्टी चल्दैन । किनकी उहाँ जेलको नेता हो, कामको नेता हैन । काम त हामीले ग¥यौं ।
अनि अध्यक्ष बनाउँन त लागिपर्नु भयो नि ?
उहाँले इञ्जोय गर्नुभयो भने ४।५ वर्ष बाँच्नुहुन्छ नत्र महिना भनेर डाक्टरले भनेपछि हामीले माधवसँग सल्लाह गरेर उहाँबाट पार्टी चल्दैन तर मर्ने बेला भयो एकपटक दिऊँ भनेर माया दया गरेर बनाएको हो ।
पार्टी चल्दैन भन्नुभयो तपाईंले तर ओलीकै कारण पार्टी सरकारमा गयो, यति ठूलो पार्टी भयो भन्छन नि ?
होइन, कतिपय कुरा नसोचेको हन्छ, फुक्त आइदिन्छ । हामीले महाधिवेशनमा पार्टी एकता होला भन्ने सोचेकै थिएनौ नि । तर एक्कासि एकता भयो त्यही एकताले पार्टी ठूलो भएको हो, एकताकै बलमा सरकार बनाउने स्थितिमा पुगिएको हो नि । तर, पार्टी एकता गराउने कुरामा विष्णु पौडेलको महत्वपूर्ण भूमिका छ म त्यो कुरा मान्छु ।
अहिले त जब्बर भएर निस्कनुभयो नि ?
अहिले कै त म जान्दिनँ तर पहिले भारतसँगको सम्बन्ध उहाँको जति राम्रो कसैको थिएन । उहाँलाई जिताउन पनि इण्डियनहरूको ठूलो सहयोग थियो, उहाँ इण्डियन नै हो । यसरी इण्डियासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने मलाई लागेकै थिएन । अहिलेचाहिँ सम्बन्ध बिग्रिएकै हो ।
के कारण होला ?
इण्डियाले पहिलाका सबै प्रधानमन्त्रीलाई इण्डियाले चलाउँथ्यो तर यी आफँै अरूबाट चल्न स्वभावका होइनन् । पहिले बाध्यता पनि थियो होला अहिले प्रधानमन्त्री भए भारतलाई टेरेनन् । यसका कारण त उनले पहिलेदेखि कसैले गर्न नसकेको काम आफ्नो अतिक्रमण भएको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो, हाम्रो भूमि छोड्दैनौं भने । त्यो उनको अति उत्तम काम हो ।
रअका प्रमुखसँगको भेटलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ नि ?
यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको स्टेटमेण्ट आइसकेको छ, म त्यसैको पक्षमा छु । एउटा देशको सरकार प्रमुखले अर्को देशको सरकार प्रमुखले गरेको कामलाई स्वीकार्नु जायज कुरा हो । यसमा अनावश्यक शंका गर्नुको कुनै तुक छैन ।